Ukuvuselelwa kwe-Gmail ... Kungcono Kunesikhathi Eside Kunanini | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 12, i-2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Ngenkathi ngijabulela kakhulu i-Google + nobulula besixhumi esibonakalayo nokusetshenziswa okukhulu, i-Gmail ibonakala ihambe amamayela ayisigidi ngehora iye kolunye uhlangothi. Ngivule i-imeyili ku-Gmail kulobubusuku futhi empeleni angikwazanga ukufunda i-imeyili:
Uma ubheka kahle i-Gmail namuhla, inamakhulu (akukho ihaba) wezinto zokuzulazula esikrinini. Kuyahlekisa impela… konke kusuka ekukhangisweni kokuqukethwe (ngenhla nangakwesokudla), ukwabelana (phezulu kwesokudla), ukumema abasebenzisi abaningi (ngezansi kwesobunxele), kuwo wonke ama-callout amboza umyalezo engizama ukuwufunda.
Le yi-mayhem emsulwa uma uyiqhathanisa nesisekelo sokuqala se-Google:
Nakhu ukubukeka okuhle kuGoogle Plus:
Ngokujabulisayo, kubukeka sengathi abantu base I-Gmail iyibonile inkinga futhi i-interface entsha yomsebenzisi iyeza maduze:
Angimane ngirongo nge-Gmail… kuyisifundo sayo yonke inkampani. Ngake ngagxeka inkampani edumile esifundeni ngoba babenezinto zokuhambisa ezingaphezu kwama-200 ekhasini labo lasekhaya. Yenza isayithi lingasebenziseki. Yize ngikuqonda ukuthi inkampani iyaziqhenya ngemikhiqizo yayo, izici, amaklayenti nolunye ulwazi… akudingekile ukubhala konke ekhasini elilodwa lesiza sakho noma uhlelo lwakho lokusebenza.
Nikeza imininingwane eyanele isivakashi ukuthola lokho ebikufuna.
Nikeza izinketho kubasebenzisi abafisa ukwenza okuningi. Lokhu kubizwa ngokuthi 'ukudalulwa okuqhubekayo'. Ngamanye amagama, nikeza kuphela isivakashi izinto eziphelele ukuze bakwazi ukufeza abakudingayo. Futhi uma bedinga ukumba kujule, nikeza indlela yokwenza lezo zinketho zitholakale.
Akukhona konke okumele kushicilelwe kusayithi lakho. Vumela amathuluzi, ama-plugins, amafomu, nezinye izengezo ukuze abantu benze izicelo ezingeziwe.
Yenza okungenani umuntu oyedwa obhekele iqembu lakho ukuthi alwe futhi aphikisane nazo zonke izinto ezengeziwe abantu bakho bangaphakathi abafuna ukungezwa ekhasini lasekhaya. Kufanele kube yimpi! Thembela ku analytics ukufakazela udaba - okuncane kuzohlala kuholela ekusetshenzisweni nasekuguqulweni okukhulu.
Ngokubona kwami, isikhombimsebenzisi esisha se-Gmail singenziwa lula nangaphezulu… mhlawumbe ngesixhumanisi esithuthukile ngaphakathi kokuzulazula kunenkinobho ngayinye yesenzo ngasinye. Okungcono kakhulu, vumela abantu ukuthi bafihle futhi babonise izinto abazikhathalelayo kakhulu. Ngilangazelela ukuvuselelwa, noma kunjalo, ukuze okungenani ngifunde i-imeyili yami.
Ukucubungula Inkokhelo Yeselula
UBrian D. Shelton
Jul 13, 2011 ku-2: 46 AM
Doug, angisakwazi ukulinda isikhombimsebenzisi esisha! Uqinisile impela ekuqinisekiseni kwakho ukuthi kufanele uqale ngomkhiqizo oyisisekelo futhi wenze "izithuthukisi" kanye "nezici ezithuthukile" zitholakale kalula kubasebenzisi abazifunayo. Okuthunyelwe okucabangayo. Ngishilo ukuthi angisakwazi ukulinda i-interface entsha ye-Gmail? 🙂
Jul 19, 2011 ngo-12: 47 PM
Senginayo i-interface entsha. Ngaphansi kwezilungiselelo, izilungiselelo zemeyili, izingqikithi, isihloko sokubuka kuqala. Ngiku-Apps ezikhokhelwayo ngakho-ke ungaqiniseki ukuthi inketho ngaphansi kokungakhokhelwa noma cha. Indlela yayo engcono. Futhi udinga ukuphuma http://www.rapportive.com